China Elungiselelweyo yentsimbi eluhlaza / teapot iti mveliso emnyama kunye nabenzi | Uqhushululu
I-Iron Iron Cookware
Ukukhonza itreyi yomthi
Ihowuliseyili China eTshayina ebhalwe Hot Sale Cast ...
Enamel Tea Kettle uphose teapot yentsimbi kunye Stainl ...
waphosa wayesebenzisa yentsimbi wawutyabeka ngeketile kunye infuser mfusa c ...
I-Green Mettle Tea I-Kettle Stovetop ekhuselekileyo ye-Iron Cast Teap ...
Isefu Black intsimbi Iti Iketile 1100ml iti Japanese style ...
Intengiso Hot wayesebenzisa tetsubin teapot Chinese waphosa intsimbi ...
I-metal Tea kettle 800ML yensimbi yensimbi yetshe yeti
I-teware yentsimbi eyenziwe ngesiko eyenziwe ngesiTshayina ene-trivet
0.8L best Eurofins lehoseyile evunyiweyo umbala etyheli e ...
I-enamel ye-cast yensimbi eluhlaza / emnyama
Iimbiza zamanzi kunye neeKettles
I-FDA, i-LFGB, ii-Sgs
I-enamel ngaphakathi kunye nokupeyinta ngaphandle
Ukuseta ii-Pitchers ezibekwe
Isamente yentsimbi eluhlaza / emnyama ephekwe ngeketile
Ukucoca i-Enamel yakho yentsimbi
u Vumela izinto zokupheka ukuba zipholile ngaphambi kokuba zihlanjwe.
u Hlamba izandla ngamanzi ashushu anesepha ukugcina inkangeleko yokupheka yokuqala.
u Yomise i-cookware kwangoko.
u Sebenzisa kuphela iplastiki okanye iinyiloni zokukrola iiphedi ukunqanda ukonakalisa i-enamel.
u Ukufumana amabala aqhubekayo, cofa ngaphakathi ngaphakathi kwi-cookware iiyure ezimbini ukuya kwezi-3
u Ukususa nakuphi na ukubhaka kwintsalela yokutya, ubilise umxube wamanzi e-1 yekomityi kunye neepunipoyi ezi-2 zesoda kwivenkile yokupheka.
u Sukuya phezulu ezantsi isiciko embizeni, oko kuthetha ukuba ukutyabeka koqweqwe lwawo akunakuchukumisana ngokuthe ngqo, oko kuya kubangela ukukrwela ngaphezulu.
Q: Yintoni MOQ yakho?
A: Ngokuqhelekileyo i-MOQ yethu ngama-500. Kodwa samkela ubungakanani obusezantsi kwi-odolo yakho yesilingo. Nceda uzive ukhululekile ukusixelela ukuba zingaphi iziqwenga ozifunayo, siya kubala iindleko ngokulinganayo, ngethemba lokuba ungabeka iiodolo ezinkulu emva kokujonga umgangatho weemveliso zethu kwaye uyazi inkonzo yethu.
Q: Ndingafumana iisampulu?
A: Ngokuqinisekileyo. Sihlala sinika isampulu ephumayo simahla. Kodwa intlawulo encinci yesampulu yoyilo lwesiko. Ukuhlawulwa kweesampulu kuyabuyiselwa xa iodolo ifike kubungakanani. Sihlala sithumela iisampulu nge-FEDEX, i-UPS, i-TNT okanye i-DHL. Ukuba unayo iakhawunti yenethiwekhi, kuyakulunga ukuhambisa ngeakhawunti yakho, ukuba akunjalo, ungahlawula intlawulelo-mthwalo kwipapa yethu, siza kuyithumela ngeakhawunti yethu. Kuthatha malunga neentsuku ezi-2 ukuya kwezi-4 ukufikelela.
Q: ixesha elingakanani isampula phambili?
A: Kwiisampulu ezikhoyo, kuthatha iintsuku ezingama-2-3. Bakhululekile. Ukuba ufuna uyilo lwakho, kuthatha iintsuku ezingama-5-7, ngokuxhomekeke kuyilo lwakho ukuba ngaba bayayifuna na into yokushicilela, njl.
Q: Kude kangakanani ixesha lokukhokelela kwimveliso?
A: Ithath 30 iintsuku MOQ. Sinamandla amakhulu emveliso, anokuqinisekisa ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza nokuba kuninzi kangakanani.
Q: Yeyiphi ifomathi yefayile oyifunayo ukuba ndifuna uyilo lwam?
A: Sinomyili wethu endlwini. Ke unokubonelela ngeJPG, i-AI, i-cdr okanye iPDF, njalo njalo. Siza kwenza i-3D yokuzoba ukubumba okanye ukuprinta isikrini sokungqina kwakho kokugqibela ngokusekwe kubuchule.
Q: Zingaphi imibala ezikhoyo?
A: Sitshatisa imibala kunye nePatone Matching System. Ke unokusixelela nje ikhowudi yemibala yePatone oyifunayo. Siza kudibanisa imibala. Okanye siya kucebisa ngemibala ethandwayo kuwe.
Q: Zeziphi iintlobo zesatifikethi onokuba nazo?
I-FDA, i-LFGB, i-SGS
Q: Liliphi ixesha lakho lokuhlawula?
A: Ixesha lethu eliqhelekileyo lokuhlawula yi-TT 30% deposite emva komyalelo osayiniweyo kunye ne-70% ngokuchasene nekopi ye-B / L. Samkela ne-LC ngokubona.
1) Ukupakisha i-Iron Iron Teapot:
2) Ukuhambisa ngenqanawe:
-Ngomthunywa, njenge DHL, UPS, kaFedEx,njl.Ngumnyango we doo, ngesiqhelo 3-4days ukufika.
-Ngomoya kwizibuko lomoya, ngesiqhelo 5-7 iintsuku ukufika.
-Ngolwandle ukuya kwizibuko lolwandle, u-ua 15-30 iintsuku ukufika.
Ukuba ixesha lakho lokuhambisa likhawuleza kakhulu, sicebisa ukuba ukhethe ikhuriya okanye ngomoya.
Ukuba akunjalo, sikucebisa ngolwandle, kubiza kakhulu.
UAlisa Chow- 0086 15383019351
Iiyure eziyi-1.24 kwinkonzo ekwi-intanethi.
2. Eyona nkonzo iphambili yentengiso kunye nasemva kwentengiso.
3. Iintsuku ezingama-50 emva kokufumana ukuthunyelwa kwediphozithi.
4. Siza kukhetha inkampani yokuthumela kunye nenkonzo elungileyo kunye nexabiso eliphantsi kuwe.
Egqithileyo Enamel Japanese waphosa teapot intsimbi 0.8L
Okulandelayo: I-0.3L yee-eurofins zehoseji ezivunyiweyo ezenziwe ngombala we-enamel tetsubin yentsimbi yentsimbi
Isamente yensimbi cookware iseti
I-FDA, i-LFGB, ii-Eurofins zivunyiwe i-ellipse Frying pan w ...
Iketile lekepusi lesinyithi laseJapan
Intengiso Hot wayesebenzisa tetsubin teapot uphose Chinese ...
Ikhitshi lasekhaya elingu-25cm ngeenxa zonke i-cass iron cass
Indlela yokujongana nomhlwa osetyenzisiweyo wentsimbi ...
I-cookware yentsimbi oyifumene njengelifa okanye oyithengileyo kwintengiso yezorhwebo kaninzi ineqokobhe elilukhuni elenziwe ngomhlwa omnyama kunye nokungcola, oku kujongeka kungathandeki. Kodwa ungakhathazeki, inokususwa ngokulula kwaye imbiza yesinyithi ingabuyiselwa kwinkangeleko yayo entsha. 1. Beka umpheki wesinyithi kwi-ov ...
Rm. 709 Shangde Int'l Isakhiwo No. 8 Kangle Street Shijiazhuang China